Okpu Ube J.Lo Na-ezuru Ihe ngosi na Foto Bikini Ọhụrụ - Ozi
Na Akụkọ Ahụike Nke Nrụgide Ihe Ọmụma & Mmụta Femina Power Brands Onye India Akpụkpọ Anụ Anu Ulo Gynaec Ibu Ibu
J.Lo Ekekọrịta Ejiri Abụọ Nke Abụọ na IG Izu A — Ma Okpu Akpa Ya Na-ezuru Ihe ngosi ahụ
Maka oge mbụ, nke ọma, mgbe ọ bụla, bikini bikinị Jennifer Lopez na-ewepụ ihe ngosi.
Onye ọbụ abụ nke 51 dị nso na nso nso a tinyebere pọtụfoliyo ezumike ntanetị site na ịkekọrịta foto osimiri ọzọ na Instagram. Ọ bụ ezie na a maara Lopez maka eserese ịsa ahụ na-acha uhie uhie, anyị enweghị ike ịkwụsị ịlele nhazi ya okpu ịwụ site n'aka Christian Dior , nke na-ezuru ihe ngosi maka ezi ihe kpatara ya.
Edemede nke Jennifer Lopez (@jlo) kesara
Na foto ahụ, Lopez na-eyi bikini bikini dị ka ọ na-eme n'ụsọ osimiri. O jiri ugogbe anya maka anwụ wee chọọ ya anya Dior Oblique Nnukwu Brim ịwụ okpu , nke na-ere ahịa maka ego efu nke $ 1,200.
O kwuru na post, Beach bum [beach emoji] #GodsLight [sun emoji] [camera emoji]: @lacarba.
Nke a abụghị oge mbụ Lopez na-ekerịta foto bikini na Instagram. Ihe niile malitere na Septemba 2020 mgbe ọ na - ezighi otu, mana foto ezumike abụọ. Nke mbụ gosipụtara onye na-egwu egwu na-edina na akwa ọcha na otu eriri pink na-asa ahụ, na-esote ya na J.Lo ọzọ na-apụta site na ọdọ mmiri-mana n'oge a, ọ nọ na-enye bikini bikini.
Naanị izu gara aga, Lopez kwụsịrị vidiyo vacay ọzọ, na-egosipụta onwe ya na bikini na-acha uhie uhie. Ihe nkiri ahụ nwere 18 nde (ma na-agụta) echiche, nke bụ NBD maka Jenny si Block. Oh, kedu ka anyị ga-esi chefuo nke ahụ iconic Guess igwu mmiri , nke J.Lo nwere na acha ọcha na oji ?
Oge osimiri enweghị ike ịbịa n'oge na-adịghị anya.
Nọgide na-aga n'ihu na akụkọ ọ bụla a ma ama site na ịdenye aha ebe a.
Njikọ: Ọta Brooke nọ na Chic One-Piece Swimsuit na Instagram (& Post ahụ enweela ihe karịrị 40K Likes)
Categories Mma Ngwa Diy
Kpọọ isiala nye Dowager Countess na Foto ndị a magburu onwe ha nke Cast 'Downton Abbey'
24 Winter Cocktails si Professional Bartenders Na You Pụrụ Nwere Ike (na Kwesịrị) Mix Up n'ụlọ
Ihe Beyonce Inner gị bụ, Dabere na akara Zodiac gị
Ntuziaka kachasị mma iji jupụta na brows gị
Kwadebe Inwe Mmetụta Obi :tọ: 'The Big Bang Theory' Cast Casts Talks Season Season
Uru ahụike nke mmiri oyi
Anyị mere ụfọdụ Igwu Ala & chọta 10 Kacha mma Swimsuits na ere na Nordstrom
17 Daines dị elu nke ga-eme ka ezé gị Toụrịa
Ihe oriri 15 kachasị mma n’okpuru 50 Calories
Hairdị ntutu dị mfe nke Gigi Hadid, ndị Olsens na ndị ọzọ a na-eme na-aga CFDA Awards
Ihe 20 I Kwesịrị Inckporo na Walmart Baby Registry
Jake Gyllenhaal Naanị Jikọrọ Instagram… & Ozugbo enwetara ya site n'aka Ryan Reynolds & Tom Holland
50 Halloween Dessert Ideas, site na Spooky zuru oke
Kedu ka Kristen Bell Sloth Saga Si Malite?
Catherine Zeta-Jones Na-egosi Mbelata Nkịtị Ya na At-Home Runway Video na IG
Aha Italianmụaka Italiantali 17 Anyị Dị Njikere Iji Stateside
Ihe Nleta Anya Na-egbochi Ọgwụ Maka Womenmụ nwanyị na 50s, Site na stlọ ahịa ọgwụ na Luxe
esi na-emeso ntutu isi na-ada ada
usọbọ iji kwụsị ntutu daa
esi eme ka ntutu gị dịkwuo elu
Ndụmọdụ ụlọ maka ihu na-enwu gbaa
ihe nkiri hindi na amazon prime
kacha mma ntutu daa ọgwụgwọ n'ụlọ